Otu esi emeziwanye onye ọrụ owu na-ama (A10001) | Singapore Top Mini GPS Personal Tracker maka Autism / Autistic Kids & Dementia okenye
Ọchụchọ GPS nke onye Agadi, Ụmụaka, Anụmanụ, Ụgbọ - Key Chain, Anya, Pendants wdg
WhatsApp: Singapore +65 8333-4466, Jakarta +62 81293-415255 (51 Ubi Ave 1 # 05-07A Level 7, S408933 - Mepee: Mọnde-Satọde: 10 am-6pm)
Igwefoto Nledo Igwe
Etu ị ga - esi meziwanye nchekwa ndị ọrụ (A10001)
Onye ọrụ naanị ya bụ onye na-arụ ọrụ nke na-eme naanị ya na ndị ọrụ ndị ọzọ na-esoghị ya. Ndị ọrụ dị otú ahụ nwere ike ịnọ n'ihe ize ndụ n'ihi na enweghị onye ga - enyere ha aka. Alonenọ naanị gị onwe gị na-etinye ọnọdụ na ntụpọ ebe ị nwere ike ịdabere na onwe gị, n'ọnọdụ ihe ọghọm ma ọ bụ ihe mberede, ọ na - abụkarị ihe egwu ebe ọ bụ na ịnọ naanị gị, ị ga - akpachara anya. Examplesfọdụ ọmụmaatụ nke ndị ọrụ naanị ya bụ: ndị na-arụ ọrụ na-ewu ụlọ, ndị ọrụ mmanụ na gas, ndị na-arụ ọrụ mkpanaka karịsịa maka ndị njem, ndị na-ahụ maka ọrụ, ndị na-arụ ọrụ onwe ha na ndị ọrụ ụlọ. Nke a bụ ụfọdụ ọghọm nkịtị ndị ọrụ na-eche ihu nwere:
Ọrịa na mberede na mkpa iji aka were aka.
Ihe mberede na ihe ọghọm nke ọrụ ha na-arụ.
Nkịtị na mkparị sitere n'aka ndị ọha, mmejọ ndị a nwere ike ịgụnye ohi na izuzu
Enweghị nlebara anya na-akwụ ụgwọ maka ịdị ọcha onwe onye, ​​ahụike yana akụrụngwa ọdịmma niile iji hụ na ahụike nke ndị ọrụ.
Ọgwụgwọ oge na nzaghachi ngwa ngwa maka ịgwọ ndị nọ n'ọnọdụ mberede nke bilitere n'ihi enweghị ohere ịnweta ọgwụgwọ mbụ ma ọ bụ enyemaka mbụ
N'ihi oke ọrụ ndị ọrụ naanị ya na-arụ, ọtụtụ mba n'ụwa niile emeela iwu iji nyere aka ma hụ na nchekwa nke ndị ọrụ naanị ya. Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwekwara ugbu a ụzọ iji hazie nchekwa na nke ndị ọrụ naanị. Offọdụ n'ime ụzọ ndị a bụ:
Companieslọ ọrụ ugbu a enweela ọzụzụ ọzụzụ iji nyere ndị ọrụ na-enweghị ebe aka aka iji hụ na nchekwa ha
Ọzụzụ njikwa esemokwu; atumatu enyere ndi oru aka ijikwa esemokwu ma gbochie onodu ahu
Mepụta akwụkwọ nke nwere iwu nke onye ọrụ naanị ya, ọ maara nke ọma na iwu edere edere na-esiri ike imebi
Assessment na-eme nyocha ihe egwu dị
Ojiji nke teknụzụ iji nyere aka na nkwukọrịta iji nyere aka na etiti mgbe enwere nsogbu; ojiji nke sistemụ na akụrụngwa, ojiji nke ndị na-ahụ maka ọnụnọ na iji ojiji nke ngwa ntọala GPS nke ekwentị emere maka naanị otu onye na-arụ ọrụ.
Teknụzụ abụwo nnukwu ebe ọ bụ na ọ keere nnukwu oke na ichedo nchekwa na ọdịmma nke ndị ọrụ naanị; njikwa ugbu a na-eji sistemụ arụmọrụ na akụrụngwa dịka ụda egwu, ụjọ ala (maka ọdịda na mmetụta) nchọpụta, pendant track pụrụ iche na ngwa ndị ọrụ wuru na GPS nke enwere ike iji maka nsuso na nleba anya iji hụ na nchekwa ndị ọrụ ha. Nke bụ eziokwu, ndị ọrụ Lone na-akwadozi site na sistemụ igwe ojii na-arụ ọrụ igwe ojii na ebe nlebara anya pụrụ iche. A na-akpọkarị ha dị ka Alarm Receing Center (ARC) na UK ma ọ bụ Dislọ Ọrụ Mgbasa Ọsọ (EDC) na US.
iHelp- Man Down Sistemu- Ihe Nmezi Onwe Onye Ọrụ Ọrụ (GPS010D)
Dịka ụlọ ọrụ ọ dị mkpa ị attentiona ntị na ndị ọrụ ma hụ na nchekwa ha. Ndị na-arụ ọrụ na-adịkarị adịghị ike, ọ ga-akpachapụrụ anya nyocha iHelp bụ naanị ihe ịchọrọ iji chebe ndị ọrụ gị. Site na ụfọdụ njirimara ndị a dị mkpa, iHelp na-echekwa ndị ọrụ ka ha na - enyere ndị ọrụ aka inyocha ha. Enyemaka ahụ bụ otu ihe eji eme ka okpukpu abụọ na-arụ ọrụ, ngwaọrụ mere iji hụ na ndị ọrụ na-echekwa nchebe naanị. Featuresfọdụ atụmatụ igodo o nwere bụ:
Ọnọdụ nsuso: Na iHelp ngwaọrụ ị nwere ike ịkọ oge ọ bụla gbasara ebe ndị ọrụ gị dị ugbu a ọ bụrụ naanị oge, ọ na - eji LBS + GPS na - eme ka onye were gị n'ọrụ chọta ndị ọrụ. Nke a dị ezigbo mkpa mgbe ọ bụla ọnọdụ mberede ma ọ bụrụ na ọdịda dara ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ kwesịrị ịnọ ya ozugbo enwere ike.
Ctionchọpụta ọdịda: ọdịda nwere ike ịdị ịdị iche iche, ọ nwekwara ike ịdị iche na-adabere n'ogo ọdịda ọdịda ahụ na-esite. Mgbe ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike daa ma nwee nsogbu mgbaji na ngwa ngwa, ha nwere ike ịda mba na ujo site na ọdịda ha nwere ike ibute nduku. Na iHelp Ngwa ị nwere ike ịchọpụta ọdịda na algorithm iche na ọtụtụ ihe mmetụta dị na ngwaọrụ ahụ na-akpali mkpu maka ọdịda. N'ụzọ nke a dịka ọmụmaatụ mkpu na - apụ na enyemaka enyemaka nke mbụ ma ọ bụ nwee ike izipu ụgbọ ihe mberede ịga nyere onye ọrụ ahụ aka.
Nkwuputa ụzọ abụọ: ọ dị mkpa ka gị na ndị ọrụ ahụ kparịta ụka, enwere ike ịchọrọ ịnyefe ozi nchekwa maka mmadụ niile ka ị na-arụ ọrụ na mpaghara nsogbu. N'okwu ndị dị ka nke a iHelp na-eme ka ndị ahụ kwe omume, ya na usoro nkwukọrịta ya ụzọ abụọ ndị ọrụ nwere ike ịkọ ma ọ bụrụ na ha merụrụ ahụ ma kpọọ maka nlekọta ahụike mberede. Ngwaọrụ na-enye ohere nkwukọrịta dị mfe n'etiti onye ọrụ na nzukọ.
Ihe omuma nke mmiri: enwere onodu ahihia ahu nke iHelp wuo, ebe ọ dị na ntanetị ahụ nwere ike ịdaba na poloda ma ọ bụrụ na ndị ọrụ naanị saịtị bụ mpaghara mmiri ama ama ma ọ bụ nwee nnukwu mmiri. Ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya ma ọ daba na mmiri ma gbajie, onye ọrụ nwere ike ịdị na-atagharị mgbe ọ na-arụ ọrụ ma jiri ngwaọrụ ihe mgbapụta mmiri ka nwee ike iru maka enyemaka ozugbo.
Otu bọtịnụ ọkpụkpọ SOS otu: Site na otu bọtịnụ, ọ na-adị mfe ịrịọ nlebara anya mberede. Ozugbo akpọchiri bọtịnụ SOS, a na-eziga mkpu na zine nleba anya mgbe ahụ enwere ike izipu enyemaka ozugbo na ọnọdụ achọrọ. Na iHelp na-enye nhọrọ a dị nnọọ nro nke zọpụtara ọtụtụ ndị ọrụ naanị ndụ na otu esi eji ya nwere ike ịghọta site na onye ọrụ ọ bụla.
Ohere dị na ekwentị mkpanaaka: E nwere ngwa mkpanaka nwere ike ibudata na ụlọ ahịa ngwa, jiri nwayọ chọọ “Ds tracker”. Site na nhọrọ a ọbụna na ekwentị gị enwere ike ịnweta ọnọdụ nke ndị ọrụ gị site na ebe ọ bụla, ị gaghị anọ ọdụ n'ihu kọmputa ụbọchị niile iji nyochaa. Enwekwara usoro ikpo okwu weebụ.
Maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ngalaba kachasị dị ize ndụ dịka owuwu, ihe ndị sitere n'okike, ahụike, mmanye ma ọ bụ ọbụna ụgbọ njem. Na iHelp Ngwaọrụ a na-enye ndị ọrụ nchekwa ihe nchekwa nchekwa zuru oke iji hụ na ndị ọrụ adịghị mma n'oge niile yana mgbe ha nọ n'ihe ize ndụ ndị were ha n'ọrụ maara ma ziga enyemaka ozugbo.
Nzuzo 2723 2 Echiche Taa
Ndụmọdụ nchekwa maka ichebe ndị ọrụ Lone (A10001)
Onye nchekwa na-enweghị onye ọrụ: Oge Iji Dị Ajọ (A10002)
Itinye Man Down Sistemu / Nchekwa Onye Ọrụ (A10002)
Ezigbo Ihe Suga nke Ọma Maka Mmejuputa Onye Ọrụ Lone…
Ntuziaka maka Ngwọta Ọrụ Lone site na Industrylọ Ọrụ (A10005)
Singapore Top 500 Enterprise 2018
email: sales@omg-solutions.com ma ọ bụ
Tinye E-mail gị: *
Nkwenye e-mail: *
NKF - Ụbọchị Mgbochi Mgbochi
Ihe omuma GPS nke OMG
Ngwa GPS ngwa GPS OMG na-agbanwegharị gị gam akporo, iOS, ma ọ bụ ngwaọrụ Windows n'ime ngwaọrụ nlekota GPS. Ịwụnye ngwa a na ngwaọrụ ndị ịchọrọ soro, ị nwere ike nyochaa ebe ha na saịtị weebụ a. Jiri usoro ndị a iji malite ịkwado ndị ezinụlọ gị (ụmụaka / nne na nna ma ọ bụ okenye), ndị enyi, ndị ọrụ, akụ ụlọ ọrụ.